गर्भवती भएपछि छाला चाउरियो ? अपनाऊनुस् यी उपायहरु – Everest Dainik – News from Nepal
गर्भवती भएपछि छाला चाउरियो ? अपनाऊनुस् यी उपायहरु
महिलाहरु गर्भवती भएपछि छालामा निकै सेन्सेटिभ भएका हुन्छन् । त्यहाँ हातले कन्याए, च्यापिएमा पनि छाला च्यातिएर दाग बस्न सक्छ । बच्चा पाइसकेपछि पनि छालामा बसेको उक्त दाग लामो समयसम्म रहन सक्छ । यसले महिलाहरुको सौन्दर्यमा असर पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्याबाट छुटकरा पाउन निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
२ चम्चा चिनीमा बदामको तेल र कागतीको जुस मिसाई घोल्ने । त्यस मिश्रणलाई छालामा भएको दागमा लेप्ने र १० मिनेटसम्म दाग वरिपरि मसाग गर्ने । १० मिनेटपछि त्यसलाई पखाल्ने । यो विधि १ महिनासम्म नियमित अपनाउनाले च्यात्तिएको छालाको दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छ।
सुपारीमा प्रशस्त भिटामिन ई पाइन्छ। यसले क्षय भएका शरीरका कोषहरूलाई पुनर्जिवीत गराउने काम गर्छ। त्यसैले सुपारीलाई १ घण्टासम्म भिजाउनुहोस्। ढाडिएको सुपारीलाई खस्रो सतहमा राखेर घोट्नुहोस् र त्यसको बाक्लो पेस्ट बनाउने ।
त्यो पेस्टलाई शरीरको कुनै पनि अङ्गमा भएको घाउचोटको दाग, च्यात्तिको छालाको दाग, पोलेको घाउको दाग लगायत अन्य खतमा लेप्न सकिन्छ । राति यसको लेप लगाएर विहान उठेर पखाल्दा उचित हुन्छ । खत नहराउञ्जेलसम्म यो विधि अपनाउनु पर्छ ।
ट्याग्स: Pregnant Period, skin